Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » trending Ugbu a » Ebee ka Coronavirus si n'ezie?
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa ozi China • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Ndị CIA nwara wee laghachite n'aka efu. US ga -achọ ịta ụta maka ụlọ nyocha China maka ihi mmiri, ebe China na -ala azụ ma na -atụ mkpịsị aka na ụlọ nyocha US na nloghachi.
CIA na ndị ọrụ nledo US ndị ọzọ lọghachitere aka ha na akụkọ ha gbasara etu COVID-19 siri malite na njikọ China.
A gwara Onye isi ala US Biden n'abalị Tuesday maka nsonaazụ enweghị atụ nke nyocha a
Ajụjụ a ka dị ma ọ bụrụ na Coronavirus bidoro n'ụzọ nkịtị ma ọ bụ nsonaazụ ihe mberede ụlọ nyocha ma ọ bụ nnwale.
Akụkọ CIA na China
Nyocha a, nke Onye isi ala US Biden nyere iwu ụbọchị 90 gara aga, na -egosipụta ihe ịma aka siri ike nke nchịkwa ahụ iji nweta ozi na imekọ ihe ọnụ site n'aka gọọmentị etiti China na Beijing.
Onye bụbu onye isi ala Trump kpọrọ COVID-19 bụ Viru nke Chinas.
Na mbido Nje Virus World Health Organization (WHO) toro China na nzaghachi Coronavirus ya.
China nwere oge ịkekọrịta ndekọ ụlọ nyocha, ihe nlele mkpụrụ ndụ ihe nketa, na data ndị ọzọ nwere ike inyekwu ọkụ na mbido nje a, dị ka akụkọ gbasara akụkọ ọgụgụ isi ọhụrụ ebipụtara taa na Wall Street Journal.
Nkwubi okwu dị ugbu a bụ ma ọ bụrụ na China agaghị enye ohere ịnweta ụfọdụ data, eziokwu agaghị apụta.
Akwụkwọ akụkọ Wall Street Journal ekpuchila azịza zuru ụwa ọnụ maka azịza, na -esochi Healthtù Ahụ Ike, wa, ndị dọkịta na ndị ọkà mmụta sayensị na China na gburugburu ụwa, obodo ọgụgụ isi US, yana nnukwu netwọkụ nke ndị ọkachamara ọrịa, ha niile na -agbasi mbọ ike ijikọta otu ihe mgbagwoju anya. atụmatụ dị iche iche. Nke a bụ ụfọdụ n'ime isi nchọpụta.
Nnyocha akwụkwọ akụkọ Wall Journal chọpụtara na China guzogide nrụgide mba ụwa maka nyocha ọ hụrụ dị ka ịnwa ịta ụta, gbuo oge nyocha ruo ọtụtụ ọnwa, nweta ikike veto karịa ndị sonyere wee kwusi ike na oke ya gakwara na mba ndị ọzọ.
Ndị otu WHO nke mere njem na China na mbido 2021 iji nyochaa mmalite nke nje ahụ gbalịsiri ike inweta nkọwa doro anya banyere ihe nyocha China na-eme tupu oge ahụ, chere ihe mgbochi ihu n'oge nleta ọnwa ya, yana enweghị ike ime nyocha nke ọma. na -enweghị ngọzi nke gọọmentị China. N'ime akụkọ ikpeazụ ha, ndị ọrụ nyocha kwuru na ihe akaebe na -ezughị ezu pụtara na ha enweghị ike ikpebi mgbe, ebe, na otu nje si malite ịgbasa.
Akụkọ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi enyi na enyi China na -agụ: Agencylọ ọrụ UN tụpụtara Fraịde ọmụmụ nke abụọ na mbido coronavirus n'ime China ma kpọọ China "Ka ọ pụta ìhè ma mepee emepe na imekọ ihe ọnụ."
Mgbe nyocha njikọta nke WHO na China kwubiri na ọ bụ igbu oge iji leba anya na nkwupụta njedebe nke a na Machị, Onye isi ala US Joe Biden soro onye bu ya ụzọ Donald Trump wee kpọọ maka nyocha ọzọ na ụlọ nyocha bio dị na Wuhan.
Mana ọtụtụ US Biolabs sokwa na ndị a na -enyo enyo na ọ nwere ike ịwụfu, na ọtụtụ ndị China etinyela akara ajụjụ na Fort Detrick, ụlọ nyocha US bioweapon guzobere n'oge Agha IIwa nke Abụọ.
Mịnịsta ala ọzọ nke China na Mọnde kpọrọ Healthtù Ahụ Ike (wa (WHO) ka ọ nọgide na-enwe ọnọdụ sayensị na ọkachamara ya n'ịchọpụta mmalite COVID-19 ma na-emegide mmegide ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke okwu ka ọ na-akwado maka akụkụ nke abụọ nke ọmụmụ ahụ.
Agencylọ ọrụ UN nyere Fraịde gara aga tụpụtara usoro ọmụmụ nke abụọ na mmalite nke coronavirus na China wee kpọọ China "ka o doo anya ma mepee ma na -arụkọ ọrụ."
Ntuziaka nke WHO ekwekọghị n'ọkwá China na ọtụtụ mba, ọnụ na -ekwuchitere ndị na -ahụ maka ozi mba ofesi China Zhao Lijian gwara ndị nta akụkọ kwa ụbọchị.
Atụmatụ maka usoro ọmụmụ ọzọ nke mmalite ụwa kwesịrị ka ndị otu so na -eduzi ya dịka ekwenyero na mkpebi ọgbakọ ọgbakọ ahụike mba ụwa nke iri asaa na atọ, Zhao kwuru.
"Anyị nwere olile anya na WHO na mba ndị otu ahụ kpachaara anya na -akparịta ụka ma na -akparịta ụka ma na -ege ntị na echiche na ntinye nke ndị ọzọ niile ma hụ na usoro nhazi atụmatụ ọrụ ghe oghe ma doo anya," ka ọ gwara ndị nta akụkọ, na -agbakwunye atụmatụ WHO. ndị ọkachamara China na -amụ ọmụmụ banyere mmalite ya.
Ọmụmụ mmalite bụ okwu sayensị ma chọọ nkwado nke ndị sayensị gburugburu ụwa, Zhao kwuru, mgbe ọ na -akatọ mba ole na ole, gụnyere US, maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị nje a.
Ndị China tụgharịrị ụta ahụ na iche na Maryland US Lab.
N'ehihie Mọnde, ihe karịrị ụmụ amaala China 750,000 abanyela WHO akwụkwọ ozi, na -arịọ ka nzukọ a mee nyocha n'ime ụlọ nyocha US.
Zhao kwuru, "US ga -eche ihu olu mba ụwa gụnyere ndị China, ma nye akụkọ na -eju afọ".
Mịnịsta mba ofesi China akpọọla Washington ugboro ugboro ka ọ zaghachi nchegbu mba ụwa maka ụlọ nyocha bio ya wee kpọọ ndị ọkachamara mba ụwa ka ha nyochaa ihe egwu ha.
Ọchịchọ ebe nje butere abụrụla okwu mba ofesi nke kpalitere mmekọrịta China na US na ọtụtụ ndị mmekọ America. US na ndị ọzọ na -ekwu na China emeghị ka o doo anya ihe mere n'oge mmalite nke ọrịa ọjọọ. China na -ebo ndị nkatọ ebubo na ha na -achọ ịta ya ụta maka ọrịa na -eme ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke okwu kwesịrị ịhapụ ndị sayensị.
Ọ dị ka eziokwu agaghị apụta, ebe puku kwuru puku na-anwụ kwa ụbọchị n'ihi ihe ọ bụla mere na COVID-19.